अब शब्दहरू सुशील प्रयोग "सामाजिक महत्वपूर्ण" भएको छ। तर तिनीहरूले के मतलब? तिनीहरूले हामीलाई लाभ वा विशेष कस्तो बताउन? सामाजिक परियोजनाहरू के कार्यहरू हुन्? यो सबै यस लेखमा छलफल गरिनेछ।
संविधान - हामीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधान कागजात बारी गरौं। उनको अनुसार, राज्य यसको नागरिकहरु आधारभूत आवश्यकता लागि जिम्मेवारी वहन। यी खाद्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, स्वास्थ्य, बाह्य र आन्तरिक धम्की विरुद्ध सुरक्षा, र यति मा समावेश गर्नुहोस्। तसर्थ, यो कार्य मा काम गर्दछ सबै - यो सामाजिक महत्त्वपूर्ण सुविधा छ। यी शब्दहरू समस्या को सम्बन्ध मा प्रयोग गर्दा, त्यो छैन एक व्यक्ति, तर समाज कम्तिमा एक महत्वपूर्ण भाग चासो राख्नुहुन्छ भनेर अर्थ उल्लेख गर्नुपर्छ। उदाहरणको रूपमा, कम पेंशन, उच्च अपराध दर र यति मा हुन सक्छ। हामीलाई चासो को वस्तुहरु (यस लेखमा) बीच प्रदान अत्यावश्यक सेवा, उत्पादन र सामान मानव आवश्यकता रूपमा एक निश्चित सामाजिक मूल्य छ कि ती हुन्:
स्वास्थ्य हेरविचार सुविधाहरु, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा।
उपभोक्ता बजार, खुद्रा व्यापार, खानपान र उपभोक्ता सेवाहरू।
संस्कृति, मनोरञ्जन र शारीरिक संस्कृति को वस्तुहरु।
क्रेडिट र वित्तीय संस्थाहरू, सार्वजनिक उपयोगिता, कम्पनीहरु जनसंख्याको गर्न अनुष्ठान र अन्त्येष्टि सेवाहरू।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, "सामाजिक महत्वपूर्ण" को शीर्षक फरक संगठन र संस्थाहरू धेरै दावी गर्न सक्नुहुन्छ।
तर के अलग प्रकार मा विभाजन आयोजित? यो उद्देश्य लागि, समान मापदण्डहरु को समूह। र तपाईं बारेमा भन्न भने? त्यसपछि महत्त्वपूर्ण सामाजिक महत्वपूर्ण गुणहरू छन्। उदाहरणको रूपमा, प्रशिक्षण शिक्षकहरूको प्रक्रिया विचार गर्नुहोस्। यसलाई जो समाज भविष्य निर्भर गतिविधि देखि महत्त्वपूर्ण विशेषज्ञहरु छ। तसर्थ, उनीहरूले काम गर्न सबै आवश्यक गुण र सीप छ कि निश्चित गर्नुपर्छ।
उदाहरणका सामाजिक गुणहरू
त्यसैले, शिक्षक गर्न सक्षम हुनुपर्छ:
विद्यालय उमेर बच्चाहरु, साथै उपायहरूको शिक्षा को प्रक्रिया पारस्परिक स्तरमा constructively संलग्न आफ्नो विकास कौशल को अनुकूली क्षमताहरु वृद्धि उद्देश्य छन्, संगठित।
एक बच्चा हुर्काउन को प्रक्रिया मा सहयोग गर्न आमाबाबुले संग परामर्श र शैक्षिक काम पूरा गर्न।
चाँडै मात्र नियम र कानुनको ज्ञान आवश्यक शैक्षिक समस्या, तर पनि improvisation र रचनात्मकता को एक महत्वपूर्ण साझेदारी समाधान।
Constructively पारस्परिक सम्बन्ध निर्माण गर्न।
एक सामाजिक परियोजना के हो?
खुल्ला ठाउँ त्यहाँ दैनिक जीवनमा काट्ने छैन भनेर विभिन्न मान्छे एक अन्तरक्रिया हुन सक्छ जहाँ तथाकथित। सामाजिक महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू एक विशेष समस्या समाधान गर्न आफ्नो सम्बद्धता योगदान। अभिनेता सार्वजनिक संस्थाहरू र दुवै व्यक्तिहरूलाई वा तिनीहरूको संघ हुन सक्छ। हामी शिक्षकहरूको अवस्था पहिले प्रभावित विकास भने, यो यति मा पुस्तकालयहरु, orphanages र विकास केन्द्र को काम उदाहरणको रूपमा विचार गर्न, र सम्भव छ। त्यसैले, यस्तो सामाजिक महत्वपूर्ण परियोजना निम्न क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन्:
विद्यार्थी र संकाय सदस्यहरु द्वारा संगठित र विश्वविद्यालय कर्मचारी, विद्यालय, Kindergartens को बच्चाहरु र यति मा को लागि सार्वजनिक र मनोरंजन गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न।
परामर्श र समस्या को सुलझाने मा बच्चाहरु संग आमाबाबुले सहयोग।
विद्यार्थी, शिक्षक विद्यार्थी तयार विश्वविद्यालय अध्ययन र तिनीहरूले वार्ड रुचि हुन सक्छ कसरी हेर्न थप समयमा आफ्नो हात प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
यी परियोजनाहरू समयमा, तपाईंले एक विशेष व्यक्ति द्वारा नजिकै सामाजिक महत्वपूर्ण गुणहरू को एक सेट गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीलाई को अवलोकन मा आधारित यसको काम र गतिविधिहरु सिफारिसहरू दिन सक्छन्।
सामाजिक महत्त्वपूर्ण विषयहरू
त्यसैले हामी मान्छे को एक महत्वपूर्ण संख्या चासोको विषय भनेर केही प्रश्नहरू कल। त्यसैले, तपाईं एक दाँतको दुखाइको छ भने - यो व्यक्तिगत को समस्या छ। तर देश को दन्त उद्योग गिरावट छ भने - यो सम्पूर्ण देशको लागि एक बेफाइदा छ। त्यसपछि शीर्षकहरू यस्तो सामाजिक महत्त्वपूर्ण संगठन सामना गर्न सुरु गर्नुहोस्। जस्तै दन्त चिकित्सक को संघ वा उच्च गुणस्तरीय चिकित्सा को आन्दोलन को रूप गर्न सकिँदैन। विषय महत्त्व अर्को सूचक त्यसैले एक आवर्तक चर्चा, संघर्ष भनिन्छ गर्न सकिन्छ र। एउटा उदाहरण, तपाईँ भ्रष्टाचार बारे सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ। सबै नकारात्मक (कम्तिमा rhetorically) यो सम्बन्धित, उनको लोप चाहन्छ - तर यो भइरहेको छैन। त्यसैले यो घटना बारे बहस क्रोध, र अक्सर तिनीहरूले हिंसात्मक skirmishes र आपसी आरोप परिणत। खैर, चिन्ने, सायद यो सिर्फ प्रकारको देखाउँछ गर्नुपर्छ, मान्छे अलमल्याउन प्रस्तुति।
त्यसैले, एक व्यक्ति सामाजिक महत्वपूर्ण र महत्त्वपूर्ण भाग लिन सक्छ। यसको गतिविधिहरु को कोर मा प्रेरणा छ। आत्म-बोध, संवाद मा, आफ्नो नेतृत्व क्षमता र यति मा लागू मा: यो आवश्यकता को एक विस्तृत श्रृंखला व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, सहभागिता brute शक्ति द्वारा कामबाट, गतिविधिहरूको एक ठूलो दायरामा व्यक्त र मूल्य-उन्मुख प्रदर्शन अन्त्य गर्न सकिन्छ। यो गहिराई आवश्यकता द्वारा समर्थित छैन जो पनि प्रेरक गतिविधि सामान्यतया, स्थिति छोटो छ र सजिलै अवस्थित गर्न बन्द गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। यो सम्भव आफ्नो अन्त ल्याइएको भइरहेको अघि त्यागेर थिए विभिन्न पहल को एक ठूलो संख्या पालन गर्न बनाउँछ। यो एक धेरै कार्यान्वयन कठिनाइ गर्न योगदान।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, एक सामाजिक महत्त्वपूर्ण "केही" एक निश्चित महत्त्व छ। निस्सन्देह, हाम्रो अवस्थामा, सबैभन्दा ध्यान विषयहरू भुक्तान छ। ताकि (2019 औं सम्म जारी) पेंशन र सम्बोधन गर्न हठी इन्कार अन्य समस्या को सञ्चितिको भाग चिसो, दुई वर्ष मा जा गरिएको छ कि आर्थिक संकट सम्झन छैन। तिनीहरू हाम्रो वास्तविकताहरु पनि साधारण र व्यापक कुरा तिनीहरूले सामाजिक महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू सामना गर्न असमर्थ छौं, मदत गर्न सक्छ, तर, हाय,। सबै पछि केहि सुरु गर्न साथ हुनत। शायद यो लेख को पाठकहरु कसैलाई सक्षम केही सामाजिक महत्वपूर्ण विषयहरू ताजा समाधान संग आएको वा सान्दर्भिक आज हो कि प्रश्न को धेरै जवाफ हुनेछ परियोजनाहरू प्रस्तावित हुनेछ। यो थियो जेसुकै होस्, तपाईंलाई लाग्छ र के स्थिति के गर्न सिक्नुपर्छ। र टाढा दराज आफ्नो विचार लुकाउन र अदालत समाज तिनीहरूलाई ल्याउँछन्। आखिर, एक व्यक्ति केही बेच्न शक्ति छैन भने पनि, यो अरू कसैले अप समाधान हुनेछ भनी अर्थ छैन। र सँगै पनि धेरै सजिलो सार्न पहाड हुनेछ।
को स्नायु प्रणाली को संरचना - मानव शारीरिक रचना पाठ
नवीनता के हो? नवाचारै को प्रकार को उदाहरण
बेडरूम मा वालपेपर कसरी चयन गर्ने?
रूस मा दिन कानुनी अधिकारी